အရေးပေါ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု! မာတင် Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 12 2019 အပေါ်	•6မှတ်ချက်
ငါ၏အလွတ်လပ်သောအရေးအသားလှုပ်ရှားမှုများဖို့ခုခံကြီးမားသောအချိုးအစားယူဆဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်ပါပဲ။ ဒါက Facebook ကဆင်ဆာကိုငါ့က်ဘ်ဆိုက် Facebook ပေါ်တွင်ဆင်းသက်ကြောင်းဧည့်သည်များ၏အရေအတွက်သည်သိသိသာသာထိုးကျလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစာရင်းဇယားများတွင်ဖော်ပြထားသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျအဆရာနဲ့ချီ shared နေကြသည်ရင်တောင်စာဖတ်သူများ၏နံပါတ် Facebook ကိုခွင့်ပြုမထားဘူးငါ့အ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းငှါလာကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Facebook ပေါ်မှာတစ်ခက် censuutslot ရှင်းလင်းစွာသည်နှင့်ကြောင်းမိန့်ခွန်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုနေဆဲစာရွက်ပေါ်တွင်တည်ရှိပေမယ့်လက်တွေ့တွင်မရှိတော့ရိုးရှင်းစွာရှုမြင်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ အတိုက်အခံ-controlled သဘောတရား၏ပင်မစီးကြောင်းမှမဆိုထွက်ခွာရိုးရှင်းစွာပြသသည်မဟုတ်။ ဒါဟာ Facebook ပေါ်မှာနီးပါး 18 တထောင်နောက်လိုက်ရှိသည်ဖို့ကောင်းတဲ့ရဲ့, ဒါပေမယ့်သူတို့သည်ငါ၏မက်ဆေ့ခ်ျရိုးရှင်းစွာမကျင့်သို့မဟုတ်ခဲရင်ဆိုင်ရရယူပါ။
အဘယ်ကြောင့်စိုးရိမ်ဖို့ရှိပါသလော ဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေသာခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာနှင့်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာများ၏အမြင်စီမံခန့်ခွဲမှု, tricks ရင်ဆိုင်ရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သင်ထင်လိမ့်မယ်, "ဒါကြောင့်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုံလောက်အောင်စမတ်ကြသည်" ။ ငါကလူမိုဖြစ်ကြောင်းလည်းမဟုတ်ဖြစ်၏ ငါကစားပါကတစ်ဦးကိုအမှန်တကယ်လွတ်လပ်သောအသံကိုကြားဖို့တစ်ခါတစ်ရံသည်ကောင်းဒါမှသန့်စင်ပြီးဖြစ်လာသည်သာအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ငါကိုငါထိန်းချုပ်အတိုက်အခံတမင်တကာအရွက်အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပွေီးမှဖြစ်ကြောင်းကတ်များအရာဝံ့ကြောင်းပြသပါတယ်ထင်ပါတယ်။
သင်ဤလွတ်လပ်သောအသံသည် အကယ်. ချင်ပါနဲ့, သင်တို့၏ထောက်ခံမှုအမှန်တကယ်အရေးကွီး၏။ ဒီ site များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ရှိသမျှတို့ကိုငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝတ်ဆင်ရန်ရှိသည်နှင့်ငါအွန်လိုင်းငါ၏နာမကိုတိုးချဲ့အတော်လေးခက်ခဲတစ်ခုဝင်ငွေထုတ်လုပ်ဖို့အောင်, မြေမျက်နှာပြင်အထက်ငါ့ဦးခေါင်းသည်လူးင့်လို့ပဲ။ သတင်းအပြီးတွင်လည်းရေးပါရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေအများစုက်ဘ်ဆိုက်များသေးငယ်တဲ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့န်ထမ်းများကို အသုံးပြု. အရာဖြစ်တယ်။ ယူဆရသူတို့တစ်တွေ (AIVD) ထောက်ပံ့ငွေအိုးရှိသည်။ ငါခြစ်ရာရန်နှင့်ဝင်ငွေမပါဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်အစမှအရာခပ်သိမ်းကိုလုပ်ပါ။ ဒါကကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်သင့်ထောက်ခံမှုအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်မသာလုပ်ဖို့ server ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, ကို web ဒီဇိုင်းနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ဒါပေမယ့်အားလုံးရေးဆောင်းပါးများဖြစ်ပါသည်။ ဒါကကိတ်မုန့်တဖဲ့ကိုရခြင်းပုံရသည်, သို့သော်သင်ထို့နောက်အများဆုံးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအယ်ဒီတာအဖွဲ့အလုပ်နှင့်အတူကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ဖြစ်ကောင်းသူတို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာအကောင်းတစ်ဦးဘတ်ဂျက်ရှိသည်စဉ်းစားပါ။
မကြာသေးမီကငါသည်ဤကုဒ်မရှိတော့ထောက်ခံသည်ကို ထောက်. , ဝက်ဘ်ဆိုက် run သောခေတ်မမီတော့ PHP ကိုကုဒ်ပြန်ရေးမှရှိခြင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံယူရို 500 ။ ဤရေအထက်တွင်သူ၏ဦးခေါင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားနေသည်သူတစ်ဦးစာရေးဆရာတစ်အကုန်အကျခံဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ website ကိုယခုနောက်တဖန်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တစ်နေ့အတားဆင်ဆာကျော်လွှားရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်ပါသည်။
plaintive သီချင်း, ဒါပေမယ့် join နှင့်ထောက်ခံမှုမှအရေးပေါ်ခေါ်ဆိုမှုကိုအဘယ်သူမျှမက, ရေအထက်တွင်မိမိတို့ခေါင်းပေါ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ပို. ပို. ခက်ခဲသည်။ အကြောင်းမူကား, ဝေမျှမယ်ပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျများမှတဆင့်ဆောင်းပါးများ, e-mail, ဒါမှမဟုတ်အမှတ်လူတို့သည်လည်းငါ့ဘ်ဆိုဒ်မှ, ဒါပေမယ့်အားလုံး Bovel: ပူးပေါင်း။ သင်၏အကူအညီအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါသည်! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Tags:: ဆုကြေးဇူးကို, အထူးပြုလုပ်ထားသော, အဖှဲ့ဝငျအဖွစျ, မာတင် Vrijland, ထောက်ပံ့
12 မှမတ်လ 2019 22: 10
ဆက်သွယ်ရေးအဘို့များစွာသောပလက်ဖောင်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုအချို့ကိုရှိသည်, Facebook မှအရေးပေါ်သိမ်းထားဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
13 မှမတ်လ 2019 10: 53
ကျနော့်အမြင်ထဲမှာအတိအကျပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဤမျှလောက်ရှေးခယျြမှုရှိပါသည်။ ပြည်သူ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ compartmentalization ၏အချိန်ကိုပြန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလမ်းအတွက် ... ပိုပြီးခေတ်မီဆန်းပြားများစွာသောသတင်းရင်းမြစ်နှင့်ပလက်ဖောင်းကနေရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒါဟာသင်သည်မည်သည့်ဘာသာတရားနှင့်အတူဆက်နွယ်ဖြစ်စေမကြားရသောအုပ်စုပြင်ပကမ္ဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ သင်သည်မည်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာသို့မဟုတ်ကော်လံကိုပြု၏, ထို့နောက်သင်သည်တစုံတခုကို join ခဲ့သလဲ, သငျသညျဘယ်နေရာမှာနားထောင်မည်။ ယနေ့သူအပေါငျးတို့ကော်လံပြင်ပကနေပျောက်ကွယ်သွားနှငျ့သငျကွားရထားတဲ့အုပ်စုတစ်စု (s) ကိုတစ်ဦးကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းကနေရှေးခယျြ ... နှငျ့သငျကနေအရောင်သတင်းအချက်အလက်ရ။
ဂိုဏျးဂဏကှဲ၏အချိန်မှာအသုံးပြုသောအတိုင်းဤသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဘဝအစားအမှန်တရားအပေါ်အခြေခံပြီးအသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၏, အရောင်နှင့်အထင်မြင်မှားစေသောဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်နေ (သို့မဟုတ်မပါ) စောင့်ရှောက်ဘယ်မှာယခုအကြီးအကျယ်မသိနိုင်ပါဘူး။ လူတွေတကယ်ကသူတို့အလုပ်ကိုတောင်မှအဘယ်အရာကိုပြစ်ဒဏ်အပိုဒ်နှင့်အတူစာချုပ်ထဲမှာသတ်မှတ်သောအဖြစ်လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့နေတစ်ဦးကသူ၏ client ကိုကအများကြီးချေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကိုယ့်ကိုဥပမာပေးရ ... အက္ခရာများခြိမ်းခြောက်အပြစ်မဲ့အရပ်သားပို့ပေးကြောင်းပြောမထားဘူး။ ပြည်သူ့အပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အပေါ်ယံအရာနှင့်သက်ဆိုင်ရာပြင်ပကမ္ဘာဆီသို့ပွဲတက်ထားရန်ပိုနှစ်သက်, ဒါကြောင့်သူတို့ snubbed နှင့်၎င်းတို့၏ဝယ်ယူအနေအထားကိုဆုံးရှုံးခံရဖို့တွေ့ခံရဖို့ထူးဆန်း၏အန္တရာယ်ကို run ပါဘူး။
ပြည်သူ့သင်ကိုယ်တိုင်ဥပမာမာတင် Vrijland ရှာနေရှာတွေ့မှတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားဖျောင်းဖျထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိန်းချုပ်ထားဤမျှလောက်ဆန့်ကျင်စရာရှိသောကြောင့်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဘယ်လိုအတိုက်အခံဤမျှလောက်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းတတ်နိုင်သမျှလဲ? ပုံမုသာစကားကိုဒါပြည့်စုံပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိနှိပ်ဝိညာဏ်၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအမှန်တရားကိုတွေ့မြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ သူတို့ချက်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်မတရားမှုတွေကိုမြင်သောအခါလူအများစုသည်ငြင်းပယ်ပြုပါသို့မဟုတ်အချို့သောမုသာစကားကိုစနစ်အတွက်ပြပွဲအပေါ်သွားပါ။ လူထုပိုင်သောလူရိုးရှင်းစွာသူရဲမဟုတ်, meekly ။ ဤသိုးသောအမဲသတ်သမားဆီသို့ဦးတည်သူတို့၏လမ်းကိုသွားကြည့်ဖို့သာအခါ, သူတို့သာဘာလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ကံမကောင်းစွာပင်ပြီးရင်သူတို့ကိုမဆီးတားနိုင်အောင်အများဆုံးသိုးစိတ်ပိုင်းအရမ်းထိတ်လန့ဆူညံအော်ဟစ်သို့မဟုတ်ငွေသွင်း။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က pugnacious သိုးကိုရှာဖွေရှိသည်!
အဆိုပါစစ်သူရဲများနှင့်သေဆုံး-ခက်အမှန်တရားရှာဖွေနေသူမာတင် Vrijland ၏ website တွင်ပြောနေရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းလာပေမယ့်ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့သညျဤ truculent သိုးအောင်မြင်ရန်သလဲ?
13 မှမတ်လ 2019 03: 31
13 မှမတ်လ 2019 11: 28
သို့သော်လည်းငါသည် (gregarious ဆွေးနွေးကြသည်) ကိုအများပြည်သူပစ္စုပ္ပန်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစာရေးဆရာကိုမှန်ကန်စွာ Facebook ကိုအသုံးပြုကြသည်ထင်
17 မှမတ်လ 2019 12: 27
ဟေး keazer, ဟုတ်ကဲ့ဋ, FB သင့်လျော်သောပလက်ဖောင်းအထွေထွေပြည်သူ့ရောက်ရှိဖို့နားလည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှစ်အနည်းငယ် FB ကိုအသုံးပြုကြလည်းနောက်, FB ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုသည်အများအပြားအကောင့် 30 နေ့ကပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့မဟုတ်စသည်တို့ကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြီးကိုမြင်လျှင် FB ၏ WhatsApp ဝယ်ယူယခုအခါဘယ်ပလက်ဖောင်းစိုးရိမ်ပူပန်ဒေတာကိုဖြတ်ပြီးဧရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါကအခြားပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအများကြီးအတွေ့အကြုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာပူဇော်နိုင်မ 80 သန်းအကောင့် 300 အတူဒါဇင်ဆက်ဆက်ရှိပါတယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးလည်းကြီးသောတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တော်တိုင်ကဤအာဏာကိုခညျြနှောငျမှပြောင်းနိုင်သည်။ ယခုအပတ်အစောပိုင်းတွင်, FB ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများကသုညခြံ, အွန်လိုင်းကြီးမားသောအော်ဟစ်ပြီးနောက်ဒါပေမယ့်လည်းပင်နိုင်ငံရေးတွင် 24 နာရီအတွင်းအရာအားလုံးကိုပြောင်းပြန်ခဲ့ FB တစ်ခုတည်းအမှားရာ၌ခန့်ထားပြီမှဖော်ပြထား, ဒီကယ့်ကိုတစ်ခုအမှားသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် တုံ့ပြန်မှုစမ်းသပ်မှု, အဘယ်သူသည်သိတော်မူ၏။ ငါ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျနော်နုတ်ဆက်ပါတယ်နုတ်ဆက်ပါတယ် FB လို့ပြောဘို့
13 မှမတ်လ 2019 16: 51
မာတင်ထောက်ခံရပါမည်။ ငါ့အလိုရှိသမျှခေါ်ဆိုခရန်ပုံငွေလှူဒါန်းသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ရန်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်သင့်သည်။ မာတင်မဟုတ်ပြည်နယ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ် !!!!
« Breaking: ကမ္ဘာ့အဆင့်မီလက်၏ Big နှိုးဆော်သံနျူကလီးယားဘေးအန္တရာယ်!
ခနယူးဇီလန်နှစ်ခုဗလီအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုဦးသေဆုံး 49 »